Software - Windows 10 Talooyin, Xeelado, Tilmaamaha Hagaajinta, Fiidiyowyada
Talooyin iyo tabaha software
Dhammaan qaybaha aan jirka ahayn ee kombiyuutarka waxaa lagu magacaabaa software. Si kasta ha ahaato dhibaatada kombiyuutarkaaga, windowspower.de waxaad ka heli kartaa maqaallo badan oo ku saabsan softiweerka nidaamka, nidaamyada hawlgalka, softiweerka la xiriira nidaamka, softiweerka arjiga, howlaha adeegsadaha, taageerada, fulinta, xakamaynta, ROM, firmware, ka-tagis, adware, bananaware , Beerware, kaarbood, daryeel, curyaan, demoware, tabarucid, freeware, software lacag la'aan ah, domain dadweyne, domain dadweyne, nagware, il furan, nabadwareeg, shareware, majarafadaha, dhejiska, uumiga, horumarinta softiweerka, farsamada softiweerka, nidaaminta, falanqaynta, hababka , softiweer -Abuurista, sidaha xogta, CD -ROM, barnaamijyo, softiweer caadi ah, softiweer shaqsiyeed, xayeysiis, shatiyo, koodh isha, qaabab, qaabeyn, dib u rakibid, dhejisyo, nooca softiweer, khaladaad softiweer, cayayaanka, xuquuqda daabacaadda, xaqa isticmaalka, taxane lambarka, shareware, spyware, adware, kaydinta muddada-dheer, moodooyinka liisanka, Moodooyinka kiraynta, shirkadda horumarinta softiweerka, freeware, microprocessor software lacag la'aan ah, xogta ACTIVE.
18. Febraayo 2021
Microsoft Windows -ka oo dhan oo dhan tobannaan sano
Nidaamka hawlgalka Windows-ka ee Microsoft wuxuu u noqday mid si dhab ah u orda muddo tobanaan sano ah. Waxay ka timid ...
2. Febraayo 2021
Barkinta cusbooneysiinta tooska ah ee Chrome, Firefox, Edge iyo Opera
Soosaarayaasha biraawsarka waxay bixiyaan cusbooneysiin joogto ah. Sida caadiga ah, waa loo dejiyay si ay had iyo jeer si otomaatig ah ugu rakibaan nuqulkii ugu dambeeyay. ...
Browser: Halkee ka heli karaa furayaasha sirta ah ee la keydiyay?
Dhammaan daalacashada hadda waxay bixiyaan shaqada badbaadinta furaha sirta ah iyo xogta isticmaalaha. Iyadoo aan loo eegin inay ku saabsan tahay Google Chrome, Firefox ...
Beddel asalka iyo naqshadda Xafiiska - Erey, Excel, Muuqaal
Taariikhda iyo naqshadeynta waxaa lagu beddeli karaa barnaamijyada Xafiiska sida Word, Excel, Outlook. Nasiib darro suuragal ma aha in ...
Tafatirka Filimka MAGIX Pro 2021 Premium oo loogu talagalay fiidyowyo wanaagsan
Waxaan ka helnay nuqulkii ugu dambeeyay ee Movie Edit Pro oo ka socda Magix, nooca ugu sarreeya 2021. Waxaan ...
Keydso oo xir dukumintiyada Xafiiska oo leh furaha furaha
Haddii aad wax badan ku shaqayso dukumentiyada Xafiiska sida B. Erey, Excel, iwm, waa faaiido in si dhakhso ah loo shaqeeyo. Gawaarida furayaasha ayaa ku caawin kara ...
8. Nofeembar 2020
Windows 10 - Muuji tusmada waxqabadka
Iyada oo la adeegsanayo nooca Windows 8, tusaha waxqabadka isku dhafan ayaa la tirtiray. Iyada oo leh barnaamijka yar ee ExperienceIndexOK, waxqabadka ...
5. Nofeembar 2020
Geli, tafatir oo daabac faallooyinka Ereyga
Geli, tafatir ama tirtir faallooyinka Ereyga? Dhib malahan. Iyada oo leh Word Word oo ka socota Microsoft waxaa suurtogal ah in la geliyo faallo qoraalka. ...
4. Nofeembar 2020
Beddel font -ka Muuqaalka - tani waa sida ay u shaqeyso
Barnaamijka Muuqaalka iimaylka ee Microsoft wuxuu bixiyaa ikhtiyaarro dejin oo badan si uu ula qabsado shuruudahaaga. Mid ka mid ah waa is -habeynta ...
3. Nofeembar 2020
Ashampoo Uninstaller 10 - Wuxuu tirtiraa dhammaan barnaamijyada
Ashampoo waxay siidaysay barnaamijkeeda cusub ee Ashampoo Uninstaller 10. Waa aalad heerka koowaad ah oo lagu ...